Isidlo sakusasa sase-Italiya eRoma | Ukuhamba kwe-Absolut
Esinye sezixeko zintle kwaye sinomdla eYurophu yiRoma. Idibanisa yonke into, phakathi kwembali, ubugcisa kunye ne-gastronomy. Nawuphi na umhambi uyakonwabela ukuphuma kwelanga kude kube sebusuku, ke kuya kufuneka uqale usuku ngesidlo sakusasa esimnandi, a isidlo sakusasa esiqhelekileyo eRoma.
Ndiyazithanda izidlo zesidlo sakusasa, ngakumbi xa ndihamba kwaye bamele isongezo samandla esifunekayo sokuqalisa usuku, ithuba lokungcamla iincasa zasekhaya, ukuziva ngathi uyinxalenye yale ndawo ndiyifumanayo. Kodwa Singatya ntoni isidlo sakusasa eRoma?
1 Isidlo sakusasa e-rome
2 Apho unokufumana isidlo sakusasa eRoma
Isidlo sakusasa e-rome
Zonke izidlo zibalulekile e-Itali, ilizwe elinentlobo ezimnandi zokutya, ke masithathe ithuba lokuqalisa usuku ngesidlo sakusasa esimnandi. Ngokucacileyo, umlinganiswa ophambili ongaze aphoswe yikhofi nakwimenyu exhaphakileyo kwaye ethandwayo kuyo yonke into kukho ikhekhe. Ke, isidlo sakusasa esiqhelekileyo nesilula eRoma yikofu kunye ne-khekhe kunye nebhotolo okanye ijam, ezinye umqathane okanye ikuki.
Uya kuyifumana le menyu kwizindlu zamaRoma okanye kwivenkile enkulu, kodwa Ukutya isidlo sakusasa ngaphandle, ebharini, lolunye uhlobo lwamava.
Ukuba ufuna into eyahlukileyo, ngenye imini kuya kufuneka usitsibe isidlo sakusasa sehotele kwaye uye kukhangela isidlo sakusasa saseRoma esineenkcukacha. Apha sele sithetha ngekofu kunye nento emnandi ukuyikhapha: i-bomba, i-ciambella, i-maritozzo okanye i-cornetto.
Masiqale ngekofu. AmaTaliyane ayayithanda ikofu nathi ke, ngenxa yesidlo sakusasa ezona ndlela zixhaphakileyo yikofu emnyama, icappucino, ikofu enebisi, icaffe lungo, icaffe freddo, icaffe al vetro ... kulungile, kukho sonke isichazi-magama ke masenze lula izinto. Injongo:
Ikofu: yi espresso elula. Iza ngekomityi encinci, ngobuncinane kwaye igxile kakhulu. Ungadibanisa ubisi okanye iswekile kuyo.
Ikofu yeMacchiato: Yikofu enethontsi lobisi olushushu.
ICappucino: ikofu enobisi olujijiweyo, bukhrim kakhulu.
latte macchiato: iglasi ende yobisi olushushu kunye nekhofi ye-espresso.
ICafe LungoInikwa ikomityi ye-espresso kwaye yile nto iyi-espresso enamanzi ashushu kancinci.
Zonke ezi nguqulelo zekofu yase-Itali zenziwe ngomgangatho: Ikofu ye-espresso. Ukuba awuyithandi, unokuhlala u-odola iMelika kwindebe enkulu, enamanzi amaninzi.
Oko ngekofu, ngoku kulungile, ngokweepastry sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo. Inye ngu I-maritozzi, isonka esinegwele esimnandi Olukhethekileyo eRoma. Imbali ithi kumaXesha Aphakathi ngo-Matshi 1 i-maritozzo yanikwa isithandwa, kwaye oko kufihlwe kwikrimu bekufanele ukuba bekukho igugu okanye iringi.
Yibhanti enkulu kodwa elula kakhulu kwaye ihlala izaliswa nge-cream cream. Unzima kakhulu? Ikhatshwa yikofu kwaye ungabelana ngayo, umbono uhlala uhlala uzama. Kukho imaritozzi elungileyo e-Il Maritozzaro, eRoscioli Caffe okanye ePasticceria Regoli. Ngokugqibeleleyo!
Enye ibhan yesidlo sakusasa eyaziwayo yi ezityi. Ngapha koko, isidlo sakusasa esiqhelekileyo sase-Itali yicappucino nje yekofu enecornetto.
Umzala ka croissant isiFrentshi Ezi buns zihlala zenziwe ngeoyile endaweni yebhotolo, ke ngoko zinencasa ebuthathaka, eswiti. I-cornetto inokuza "Elula" okanye igcwalisiwe ngejem, imermellata, okanye cream. Kukho iindlela ezisempilweni, ukuba zinzima kakhulu kuwe, emva koko kukho ii-cornettos ezihlanganisiweyoOko kukuthi, yenziwe ngomgubo opheleleyo kwaye uzaliswe ngobusi.
Utya phi eyona cornettos intle? Ewe, ungahlala phantsi usele ikofu kwaye utye umbona Isikhumba seCaffe, ePizza del Risorgimento, okanye kwi IPasticeria Barberini, kwingingqi yeTestaccio, okanye nje phambi kwale ndawo, kwi Idepho yetram. Ukuba awufuni ikofu emva koko yeyona khekhe ibalaseleyo eRoma UPanificio Bonci, kwisiPrati.
Ukuba isidlo sakusasa saseRoma sinento efana necroissant, kwaye ishiya amaFrentshi anelisekile, ikwanayo nento efana nedonut kwaye itsala abantu baseMelika. Kule meko sithetha ngayo i-ciambella.
Njengomrhumo, yi intlama eqhotsiweyo kwaye inebhafu yokuhlambela ke xa uluma kuyo, iyatyibilika kancinci kwaye umlomo wakho uzaliswe ngamanzi amnandi. Ezona ciambellas zibalaseleyo zithengiswa eLinari, eVía Nicola Zabaglia, 9.
Omnye umvaba oqhelekileyo wekhekhe laseRoma lesidlo sakusasa yi bombolone, okanye ibhombu, Ibhanti eqhotsiweyo enemibala eqaqambileyo egcwele i-custard.
Esi sibonelelo siyaqhubeka nezinye iibuns eziqhelekileyo ezithengiswa kwezinye iivenkile ezinamakhekhe afakiwe. Umzekelo, embindini waseRoma indawo enjalo URoscioli Caffe, emi phakathi kweGhetto yamaJuda kunye neCampo de'Fiori. Nangona iyindawo enexabiso eliphezulu ukuba nesidlo sakusasa ngenye imini, ungayenza kwaye wonwabele umgangatho weDanish yayo okanye i-crostata yayo, iikeyiki ezimnandi ngeapile kunye neeamangile ezimnandi.
Ukuza kuthi ga ngoku kuswiti, akunjalo? Ke ukuba ungomnye wabo bafuna into enetyiwa Ungakhapha ikofu nge tramezzini. Ezi zonxantathu zesonka esimhlophe esineemvuthu kunye nemayonnaise eneefill ezahlukeneyo. Azikho nto inkulu. Ewe, zikhangeleka zilunge kakhulu. Ukuba uye eJapan wabuya wonwabile lolu hlobo lweesendwitshi, abo baseRoma baya kukudanisa noko. Gcina engqondweni.
Ekugqibeleni unako dibanisa iswiti kunye netyuwa kwi eqhelekileyo brunch, isidlo sakusasa okanye isidlo sasemini saphambi kwexesha. Isiko laseMelika elijikeleze umhlaba!
Apho unokufumana isidlo sakusasa eRoma
Ngokucacileyo, brunch ayisiyiyo isidlo sakusasa esiqhelekileyo saseRoma kodwa kulisiko eliye lathandwa kwaye lahlanganiswa esixekweni kunye nesidlo sakusasa esiqhelekileyo. Ke, ukongeza kwiisayithi esasizithiya amagama, yalatha ezi ezinye:
UMarigold waseRoma, Via Giovanni da Empoli, 37) lukhetho lokuqala. Yivenkile yokutyela eneebhaki ezincinci ezenza isonka esenziwe ekhaya, ii-rolls zesinamon, i-yogurt, i-granola, ipakeki, amaqanda nokunye okuninzi. Yongeza ikofu ekhethekileyo kunye noluhlu olude kunye nolutyebileyo lweeyi kwaye une-brunch efanelekileyo.
UCaffè Merenda: Yindawo ethandwa kakhulu phakathi kwamaRoma, iingcali kwi-croissant ene-pistachio filling. I-brioche ilungile kwaye yonke i-pastry yayo iyabonakala. KukuVia Luigi Magrini, 6.
Ujinja: kumaza okutya okusempilweni. Le yindawo yokutyela ekwahambisa isidlo sakusasa: kukho i-smoothies, i-pancake, amaqanda kunye ne-ham, ii-cornettos kunye nekofu. Ukuhamba ngeBorgognona, 43-46.
UNero Vaniglia: ivula kwangoko, chwetheza u-6 kusasa. Inesitayile sanamhlanje kunye nayo yonke ikhitshi ebonakalayo. Yonke into yenzelwe ekhaya kwaye eyona ilungileyo yile iimignons kunye ne-mousses yeencasa ezahlukeneyo. Kuphakathi kweOstiense kunye neGarbatella, Circonvallazione Ostiense, 201.
Coromandel: Kufuphi nePiazza Navonna kwaye ikhonza iipasta ezimnandi ezivela kwihlabathi liphela. KukuVia di Monte Giordano 60/61.
Izinto: Apha uya kuzama konke okusemandleni pastocciottos ukusuka eRoma. Ziyinxalenye ye- Isidlo sakusasa esiqhelekileyo sePuglia kwaye bakuluhlu lokutya okunamasebe amathathu eRoma. Enye isePiazza Bologna, enye eSallustiano enye kwiKota ye-Afrika. Unokuzama kwakhona i-panzerotti kunye ne-focaccias. Ukuhamba ngeLorenzo il Magnífico, 26, nge-Venti Settembre, 41 kunye ne-Viale Eritrea, 108.
IBar Benaco: le ndawo intle, ilula kwaye imnandi. Ihlala iziphinda kwaye eyona nto intle iyenzayo ziicroissants. KukuVía benaco, 13.
Cafe delle Comari: Unokukhetha ukuhlala ebharini okanye etafileni. Iindidi zescones zilungile kwaye abasebenzi bajonge kakhulu. Kukufuphi neVictoria ke yindawo elungileyo ukuba emva kokuqala ukhenketho lwakho ebumelwaneni. UVía Santamaura, 22. Kuvulwa ngoMvulo ukuya ngeCawa ukusukela nge-7 kusasa ukuya kwi-9 ngokuhlwa.
UCaffè Novecento: Inegumbi leti elungileyo kwaye amaRoma amaninzi ancokola nawo.Iphaka isidlo sakusasa kude kube semini emaqanda. Ukuhamba nge-del Governo Vecchio, 12.
LI.BE.RA + kungekudala: Le yindawo yokutyela evulekileyo enikezela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye neyure yokonwaba. Kukufutshane nePizza Navona kwaye ipholile kakhulu. KukuVia del Teatro Pace, 41.
I-Saint Eustachio il Caffè: ijikeleze i-pantheon kwaye iyaziwa ngokugqwesa kwekhofi yayo entsha. Pizza di S. Eustachio, 82. ukusukela nge-7: 30 kusasa.
Olu lolunye lwezinto onokukhetha ukuzonwabela Isidlo sakusasa sase-Italiya esiba seRoma, kodwa abayi kukuyekela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Isidlo sakusasa esiqhelekileyo e-Italiya eRoma
uncuthu lwengoma sitsho
Ndiyalithanda eli phepha.
Kuyimpazamo ukucinga ukuba ipanino hayi ipanini, eya kuthi ibe sisininzi, yinxalenye yesidlo sakusasa. Isidlo sakusasa sase-Italiya sinezinto ezimnandi kuphela, akukho nto ityuwa. I-panino ithengiswa nangaliphi na ixesha kwabo sele benesidlo sakusasa iiyure kwaye balambile njengesiqwengana sakusasa.
Oo-smiley ukubulela sitsho
Ekhaya, ukungaqondani kuhlala kwenzeka ngakumbi ngenxa ye-
Ukuxinana kwaye yiyo loo nto i-IKEA iveza ii-Emoticons, isixhobo
unxibelelwano ukuqinisekisa ukuqonda ekhaya.
Ngokubhekisele kwi-Android, kulindeleke ukuba uhlaziyo lwexesha elizayo luza
ngenisa imo yokubonisa efanayo. , Fransi,
EJamani, e-Itali, Ezantsi kwekhibhodi, uya kuba nakho ukubona imixholo eyahlukeneyo ye-emoji
khetha. Isimboli yewotshi kwicala lasekhohlo ikubonisa okutsha
oyisebenzisileyo. Ikwakhona ngokuzenzekelayo, 30
Izichazi magama zezona lwimi zibalulekileyo, kwiibhodi yezitshixo yeselfowuni yam (Imenyu-Useto-uLwimi kunye neKhibhodi) apho kuphela
yenza ukuba isicelo endisikhupheleyo sisetyenziswe kwaye yiyo loo nto, iyandisebenzela
Phendula kwiimvakalelo zakho ukubulela